Fampahafantarana | Martech Zone
Martech Zone dia bilaogy noforonin'i Douglas Karr ary tohanan'ny mpanohana anay. Raha misy fanontaniana momba an'ity bilaogy ity, azafady Mifandraisa aminay.
Ity bilaogy ity dia manaiky endrika fanaovana dokambarotra, fanohana, fampidirana vola na endrika fanonerana hafa.
Ity bilaogy ity dia manome vola ny sasany amin'ireo rohy.
Manaraka ny fenitry ny marketing amin'ny vava ity bilaogy ity. Mino ny fahamarinan'ny fifandraisana, ny hevitra ary ny maha-izy antsika izahay. Ny tambin-karama voaray dia mety hisy fiantraikany amin'ny atiny fanaovana dokambarotra, lohahevitra na lahatsoratra vita ato amin'ity bilaogy ity. Io atiny, habaka dokam-barotra na lahatsoratra io dia ho fantatra mazava ho atiny misy karama na tohana.
Ny tompona an'ity bilaogy ity dia omena onitra hanome hevitra momba ny vokatra, serivisy, tranokala ary lohahevitra maro hafa. Na dia mahazo onitra amin'ny lahatsoratray na dokam-barotra aza ny tompon'ity bilaogy ity dia manome foana ny hevitray, ny zavatra hitanay, ny zavatra inoanay, na ny zavatra niainanay momba ireo lohahevitra na vokatra ireo. Ny fomba fijery sy ny hevitra voalaza ao amin'ity bilaogy ity dia an'ny an'ny bilaogera ihany. Ny fangatahana vokatra rehetra, ny statistika, ny teny nalaina na ny solontena hafa momba ny vokatra na serivisy dia tokony hohamarinina amin'ny mpanamboatra, mpamatsy na antoko resahina.
Ity bilaogy ity dia mirakitra atiny mety haneho fifanoherana mahaliana. Ho fantatra hatrany ity atiny ity.